Word Link 2.6.4 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.6.4 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား စကားလံုး Word Link
Word Link ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အစဉ်အဆက်အကောင်းဆုံးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဂိမ်း! ကြောင့်ဘယ်အချိန်မဆိုအော့ဖ်လိုင်း Play! သင့်ဦးနှောက်ကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့ DOWNLOAD! - အခမဲ့, နေ့စဉ်ဆုလာဘ်ကိုခံစား
သင့်ရဲ့ဝေါဟာရသက်သေပြလိုပါသလား? ဂန္စကားလုံးဂိမ်း၏စိတ်လှုပ်ရှားခံစားကြည့်ပါ? ရိုးရှင်းစွာ screen ပေါ်မှာပွတ်ဆွဲခြင်းဖြင့်ကစားရန်ဆန္ဒရှိ? အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကို Link ကိုကား! ယခု free download! ကျနော်တို့ကသင့်ဦးနှောက်ကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့ကွဲပြားခြားနားသောစမ်းသပ်မှုပူဇော်!
♥ရိုးရှင်းသော, လွယ်ကူသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ, ပွတ်ဆွဲခြင်းနှင့်ဂိမ်းတစ်ခုအနိုင်ရ ချိတ်ဆက်. !
♥ အပိုဆောင်းဆုရရှိရန်အပိုဆုစကားလုံးများကို Explore!
♥အော့ဖ်လိုင်း Play! အဘယ်သူမျှမ wifi လိုအပ်
♥ အခမဲ့အရိပ်အမြွက်, အခကြေးငွေမပါဘဲအကြံပေးချက်များရ
♥ထပ်မပါဘဲ 2000+ အဆင့်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးအတွက်စကားလုံးမာစတာဖြစ်!
သငျသညျစကားလုံးဂိမ်းတစ်ခုကြီးမားသောပန်ကာဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းကြိုးစားရန်တွန့်ဆုတ်ကြဘူး! အလွန်ရယ်စရာနှင့်အားမစိုက်ရ! ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အအရှိဆုံးမမေ့နိုင်သောဂိမ်းအတွေ့အကြုံကိုအောင်ကတိပေး!
Word Link အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Word Link အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Word Link အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Word Link အား အခ်က္ျပပါ
speedman စတိုး 54 160.71k
Word Link ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Word Link အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.6.4
ထုတ်လုပ်သူ Worzzle Games
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.wordlinkplay.com/privacy.html
App Name: Word Link
Release date: 2019-09-03 15:42:36
လက်မှတ် SHA1: 92:67:D7:17:9E:6B:98:75:A1:96:6D:D6:48:F8:4E:39:31:FF:26:CA
အဖွဲ့အစည်း (O): Word Puzzles
Word Link APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ